Nhau - Inodhura-inoshanda pfuti yekutsvaira muchina wekusiya zvikamu, imwe yekumira tora
Mutengo-unobudirira kupfura blasting muchina unodzivirira mativi, imwe yekumira tora
Kutarisana nemamiriro ekuwedzera emusika mumaindasitiri akasiyana siyana, makambani akaisa kumberi kunetsa kumitengo yekugadzira uye zvinodiwa nehunhu hwechigadzirwa. Iyo yekupfura yekuputika maitiro mune yekugadzira maitiro chinhu chakakosha chinongedzo chinokanganisa chigadzirwa mutengo uye mhando kutonga. ChakanakaPfura nenyunje muchinauye inodhura-inogadziriswa yezvipenga zvikamu inoita basa rakakosha mukugadzikana uye kushanda kwakanaka kweiyo nyunje michina. Icho chinhu chakananga chinokanganisa mashandiro eiyoPfura nenyunje muchina uye mutengo wekupfura kuputika.
Iyo yekuparadzanisa zvikamu zvemitengo inowanzo kuve kuratidzwa kweyakajeka mutengo mashandiro, uye inonyanya kukanganiswa nehunhu hwemukati. Iyo yemhando yepamusoro yezvipenga zvikamu zvakaburitswa neTAA kambani ine yakakwira blast kumhanya uye hombe kupfura kunyorera kugona neiyo imwechete simba, iyo yekuputika kushanda uye yekufema mhando iri yepamusoro.Iyo yakakamurwa muzvikamu zviviri: kukanda kuumba uye machining kuumba. Iyo inosarudza zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye inotora yepamusoro kupisa kurapwa tekinoroji kunyatso kudzora kuomarara uye microstructure yechigadzirwa, inoita kuti iwedzere hupenyu uye yakakwira mutengo mashandiro.
Nemakore eruzivo uye tekinoroji mune yepamusoro yekurapa indasitiri, isu tine nyanzvi dhizaini uye R&D timu uye yakazvimirira pfumo blaster R&D yepakati. Zvese zvigadzirwa zvinogona kutumirwa mushure mekuomesa chigadzirwa kuyedzwa, kuisirwa & kugadzirisa zvisati zvaitika usati wabva kufekitori.
Maitiro ekugadzira ese eedu eparutivi zvikamu akapfuura akaomarara kugadzirwa kudzora uye mhando yekutarisa maitiro. Iwo mamodheru akazara uye anogona zvakare kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi. Izvi zvinogona kudzikisa zvakanyanya mutengo wezvikamu uye kuwanda kwemidziyo yekugadzirisa, nokudaro ichideredza mari yekuchengetedza vashandi Uye kudzikisira mutengo wekuzorora.
TAA Simbi yave ichibatanidzwa zvakanyanya mupfuti yekuputika indasitiri kweanopfuura makore makumi mana uye yakashandira vatengi vazhinji. Iyo kambani ine akati wandei ehunyanzvi epamusoro mainjiniya mainjiniya vanoziva neakajairika epamba uye ekunze mamodheru, uye vanoita mukushandisa kwebara rakapfura nenyunje abrasives, zvishandiso zvehunyanzvi rutsigiro, uye kupfura blasting muchina kukwidziridzwa. Zvese zviitiko uye tekinoroji zvakavimbika uye zvinogona kukubatsira iwe "kudzivirira dambudziko diki uye kugadzirisika nyore kumatambudziko makuru" kune yako michina.